Tresaka Archives - Page 95 sur 136 -
19/07/2017 admintriatra 0
Tokony hazava amin’ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena fa tsy misy ifandraisan’ny asa fanaovan-gazety velively, raha ny lahatsoratra efa nivoaka tany amin’ireny haino aman-jery ireny no vesatra iampangana an’i Fetra Rakotondrasoa, tsy misy hidiran’ny resaka fahalalahana …Tohiny
Roa isan’andro ny fitoriana voarain’ny Pôlisim-pirenena etsy Anosy amin’ny resaka « cybercriminalité » na ireny fampiasana tambazotran-tserasera toa ny facebook ireny. Mampalahelo tokoa ny zava-misy fa any amin’ny zavatra ratsy hatrany no andanian’ny sasany fotoana sy vola …Tohiny
«Iza indray àry e?»
Mangataka ny fahaleovantenan’ny Fitsarana, hono, ny SMM anton’izao fitokonana mampikatso tanteraka ny Tribonaly izao. Fahaleovantena inona moa izany no angatahan’izy ireo? Fa angaha moa ny Mpitsara miandry baiko avy amin’ny Filoha na ny Praiministra vao …Tohiny
Tsy midika hoe fanaovana ny danin’ny kibony sy ny baranahiny ny fahalalahana maneho hevitra. Tsy maintsy hajaina ny fahalalahan’ny hafa. Tsy maintsy tandrovana ny fiainam-piarahamonina eo am-panehoana ny fahalalahana maneho hevitra. Ny Lalàmpanorenana andininy faha-10 …Tohiny
« 1 … 93 94 95 96 97 … 136 »